I'm addicted to eating plastic: Meet the teenage girl who snacks on water bottles, CD cases and even TV remotes
ပလတ်စတစ်ကိုသာ အဟာရထင်တဲ့ သူလေး..
ထူးထူးဆန်းဆန်းသူစွဲလမ်း အစီအစဉ်များတင်ဆက်ပြသလေ့ ရှိသည့် TLC ရုပ်သံအစီအစဉ်
ဟာ အများနဲ့ မတူတစ်မူထူးခြားသည့် ပြောင်းဆန်မှုန့် ကိုသာစားတတ်သည့် သူ၊ ဆံပင်အ
ခြောက်ခံစက်ဖြင့် သာအိပ်တတ်သည့် သူ စသည်ဖြင့်ထူးထွေဆန်းပြားသည့် လူများ၏အကျင့်
ယခုသတင်းပါတ်တွင် စတင်မည့် အစီအစဉ်သစ်များတွင်တော့ ယခင်ပြသခဲ့ သည်များထက်ပိုမို
ဆန်းပြားသည့် အဖြစ်အပျက်များပါရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ ကတိပေးထားပါတယ်...
တတိယနှစ်ပါတ်လည်အစီအစဉ်မှာဆိုယင် ထူးထူးဆန်းဆန်း ပလတ်စတစ်များကို စားရမှကျေ
နပ်သည့် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ကာင်မလေး ကေလင်း ရဲ့ အကြောင်းလည်း ပါဝင်နေပါတယ်...
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ စက္ကရာမင်တို အရပ်မှ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဆယ်ကျော်သက်
မလေးဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ၁၁ နှစ်အတွင်း သူမအနေဖြင့် ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းပေါင်း ၆၀၀၀၀
ကျော်ကိုစားခဲ့ ပြီးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေပြီး သူမဟာ သာမာန်အစားအစာထက် ပလတ်စတစ်
ရေသန့် ဗူးခွံများစားလို့ ကတော့ ကြိုက်သလောက်သာစားပါကွယ်...
Strange addiction: Kailyn, 18, from Sacramento, California, is hooked on eating plastic and believes she has eaten over 60,000 items over the past 11 years
နမူနာပြသည့် ရုပ်သံပြကွက်အတိုလေးတွင် သူမအား ရေပုလင်းခွံများမှသည် စီဒီချပ်ပြားများ
အထိ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းမျိူးစုံအား စားနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်...
သူမစားခဲ့ သည့် ပစ္စည်းများစာရင်းတွင်တီဗီရီမုဒ်ကွန်ထရိုး ၁၂ခု၊ ပုတီးစေ့ ၅၀၀၀ ကျော်၊ ဖျော်
ရည်ခွက်များတွင် အသုံးပြုသည့် ပလတ်စတစ်မွှေတံ ၁၀၀၀ ကျော်၊ ပလတ်စတစ်ခရင်း ၁၀၀၊
ရေပုလင်းခွံ ၁၀ ဗူးခန့် ၊ ချိူလိမ်ကလည်း ၂ ခု၊ စီဒီဗူး ၃ခု၊ ပလတ်စတစ်အင်္ကျီချိတ် ၅၀ နှင့် ပ
လတ်စတစ် ခွက်အဖုံး ၂၅ ခု တို့ ပါဝင်ကြောင်း ရိုက်ကူးနေသည့် ရုပ်သံကင်မရာရှေ့ တွင်ပြော
ပလတ်စတစ်ဟာ ကျွန်မလိုအပ်နေတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ ခံစားရပါတယ် လို့ လည်းသူမက ၀န်ခံ
ပလတ်စတစ်ကိုဘာကြောင့် များနှစ်သက်စွဲလမ်းနေပါသလည်းလို့ မေးမြန်းခဲ့ ရာမှာတော့ သူမ
က ပလတ်စတစ်ရဲ့ ဖွဲ့ စည်းပုံ၊ ပုံသဏ္ဍာန်က အရသာထက်ပိုပြီးသူမကိုစွဲဆောင်စေပါတယ်လို့ 
ဘာဂါမကြိုက်၊ ဂျေဒိုးနတ် မခုံမင်...ဗူးခွံကိုသာ တွယ်တာမိပါတဲ့ 
Favourite snack: Kailyn believes she has eaten over 60,000 plastic goods, and will even choose it over food
ရီမုဒ်ကွန်ထရိုးကလည်း သူမရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး စားစရာထဲမှာပါနေပါသေးတယ်...
Out of control: Kailyn says television remotes are one of her favourite things to eat, and demonstrated how she starts by biting off the buttons
စားလိုက်ယင်ကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်နေပြီး မာဆတ်ဆတ်နေပေမယ့် ချောမွေ့ တဲ့ တည်ဆောက်
ပုံလည်းရှိတာမို့ နှစ်သက်မိပါတယ်လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
ဒါစားနေရယင်ကို အဟာရမြောက်နေတော့ တာပါပဲ...
Staple diet: One of the things Kailyn eats most frequently are cocktail swords for drinks
တီဗီရမုဒ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်၊အရသာကိုက သူမကိုအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတစ်ခုဖြစ်နေစေပါတယ်...
အဲဒီအကြိုက်ဆုံးအစားအစာကိုစားရမယ်ဆိုယင် ပထမဦးဆုံးခလုပ်ကလေးတွေကို ကိုက်ဖဲ့ ပြီး
သူမအနေနှင့် မကြာခဏ စားနေမိတဲ့ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းကတော့ သူမအလုပ်လုပ်နေသည့် 
စားသောက်ဆိုင်တွင် ရှိသည့် အဖျော်ယမကာမွှေတံကလေးများပင်ဖြစ်ပါတယ်...
" ကျွန်မက စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ဧည့် ကြိုတစ်ယောက်လေ...ဒါကြောင့် ဒီ ဓါးပုံစံပုလတ်စတစ်မွှေ
တံကလေးတွေကတော့ ဒီမှာအလွယ်တကူကို အများကြီးရနေနိုင်တာပါပဲ...
အဲဒါလေးတွေကိုတော့ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပါပဲ...စိတ်မညစ်တဲ့ သာမန်နေ့ တစ်နေ့ ဆိုကျွန်မဖြင့်
၁၅ ကြိမ်လောက်စားဖြစ်ပါတယ်..." လို့ သူမကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
တစ်ပါတ်၊ တစ်ပါတ် သည်လောက်များပြားသည့် ပလတ်စတစ်များအား စားသောက်နေခဲ့သည့်
သူမရဲ့ အကျင့် ဆန်းဟာ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သူမ၀န်ခံခဲ့ ပါတယ်...
ယခုနှစ်တွင်တင်ဆက်မည့် ထူးဆန်းထွေလာ၊ စွဲလမ်းရာ အစီအစဉ်မှာ ကေလင်း ရဲ့ ထူးထူးခြား
ခြားစွဲလမ်းနှစ်သက်မှုက အထူးဆန်းဆုံးတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး...
အာကင်ဆော့ ပြည်နယ်မှ နာသန်နီယယ် ဆိုသည့် လူတစ်ဦးရဲ့ သူ၏ကားအပေါ်အမျိူးသမီးတစ်
ဦးလိုနှစ်သက်မြတ်နိုးစွဲလမ်းနေသည့် အဖြစ်ဆန်းဖြင့် ရုပ်သံအစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါ
ဒါတွေစားတာကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်ကြောင်းသိပေမယ့် လည်း...
Concern: The teenager is aware that her plastic addiction could be harmful to her health
အဆိုပါရုပ်သံအစီအစဉ်တွင် လက်သည်းဆိုးဆေးကိုမှနှစ်သက်စွာသောက်နေတတ်သည့် အမျိူး
သမီးတစ်ဦးအကြောင်းနှင့် ကြောင်စားသည့် အစာလုံးလေး ၉၀၀ အားနေ့ စဉ်စားသုံးနေသည့်
ကားနဲ့ သူနဲ့ ချစ်ကျွမ်းဝင်နေခဲ့ တာ ၅ နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ ပါပြီ...
၁၉၉၈ မိုဒယ်ကားနဲ့ ချစ်နေပြီးကတည်းက ကားကို မွေးနေ့ လက်ဆောင်တွေဝယ်ပေးယုံတင်
မက၊ ကားနဲ့ ပါ သံဝါသပြုခဲ့ ပါတယ်ဆိုပါ....( မည်သို့ မည်ပုံပြုလုပ်လေသည်တော့ မသိ...)
နောက်တစ်နေ့ တွင်ထုတ်လွှင့် မည့် အမေးအဖြေအစီအစဉ်တွင် ကားချစ်သူ အန်ဒါဆင်ကူးပါး
က " ပြန်ပြောပြဖို့ တော့ တော်တော်ခက်လှပါတယ်...ကျွန်တော်ကားကို နင့် နင့် သီးသီးချစ်နေ
ခဲ့ မိတဲ့ အဖြစ်ကိုက ဆိုးပါတယ်...
ကာလအတန်ကြာရှိနေခဲ့ သလိုမျိူးပါပဲ...သူ့ ကိုဘယ်လိုပဲနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုတွေပြပြ သူ့ ဆီက
ဘာမှတုံ့ ပြန်မှုမရတာကိုလည်းသိပါရဲ့ ...
ဒါပေမယ့် မယ့် လည်း ကားကိုကားအတိုင်းမြင်ပြီး Chase လို့ တောင်အမည်ပေးထားပါတယ်...
၅ နှစ်တာကာလအတွင်းသူလည်းအတွေ့ အကြုံတွေတော်တော်ရနေခဲ့ ပါပြီ..." လို့ သူကရှင်းပြ
လက်သည်းဆိုးဆေးမှ မသောက်ယင်မနေနိုင်တာကလွဲလို့ ....
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ဘာသာ ကတော့ တစ်နေ့ လျှင်လက်သည်းဆုံးဆေးရည် ၅ ပုလင်း
သောက်လာခဲ့ သည်မှာ ၅ နှစ်ရှိလေပြီ....
လက်သည်းဆိုးဆေးမသောက်ပဲ တစ်နေ့ တောင်မှ နေလို့ မရပါဘူးလို့ လည်းသူမကဆိုပါသေး
အသစ်တင်ဆက်မည့် ရုပ်သံစီးရီး၏ နမူနာပြကွက်တွင် ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်ခြင်းအလျင်းမရှိ
သည့် အမျိူးသမီးက လက်သည်းဆိုးဆေးပုလင်းထဲမှ လက်ကိုင်ဘရပ်ရ်ှလေးကိုနှုတ်ခမ်းထက်
က လျှာဖျားတွင်တင်က ဆေးရည်များပြောင်အောင်လျှက်လိုက်သည်ကို မြင်တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါ
လူတိုင်းအတွက်တော့ လက်သည်းဆိုးဆေးရည်အားလုံးဟာအတူတူပဲလို့ ထင်နိုင်ပေမယ့် ဘာ
သာကတော့ အပြာရောင်လက်သည်းဆိုးဆေးရည်ဟာ သူမရဲ့ အကြိုက်ဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်...
လက်လက်ထစေတဲ့ အရောင်ပြေးများနဲ့ ဆိုးဆေးရည်ကိုတော့ ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးပါပဲလို့ သူမ
သူမအနေနှင့် တစ်နေ့ လျှင်လက်သည်းဆိုးဆေးမသောက်ရလျှင်မနေနိုင်ပါဘူးဟုဘာသာက အခိုင်အမာပြောနေသော်လည်း သူမရဲ့ မိသားစုကတော့ ယခုကဲ့ သို့ အကျင့် ဆန်းကြောင့် သူမ
ခနာကိုယ်တစ်ခုခုပျက်ယွင်းပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာ စိုးရိမ်နေကြပါတယ်...
TLC show My Strange Addiction has shown us people addicted to everything from corn starch to sleeping with hairdryers. But the new series, which starts this weekend, promises its most bizarre subjects yet.
Season three features teenager Kailyn, who admits to being hooked on eating plastic.
The 18-year-old, from Sacramento, California, believes she has eaten over 60,000 plastic goods over the past 11 years, and will even choose it over food.
She is seen crunching onavariety of items inatrailer for the show, from water bottles to CD cases.
Listing some of the things she has eaten, Kailyn tells the camera: 'I have eaten 12 remotes, over 5,000 beads, over 1,000 cocktail swords, 100 forks, about ten water bottles, two pacifiers, three CD cases, about 50 hangers, about 25 plastic lids on to-go cups...'
She admits: 'Plastic is something I want and I feel like I need.'
'It's the way it crunches and feels and it hasarough but at the same time smooth texture to it,' she says.
The texture ofatelevision remote control is probably one of her favourites, Kailyn reveals.
Describing how she goes about eating one, she says: 'I'll takeabutton off, and I'll put it on each side of my mouth, then I swallow it.'
The plastic items she snacks on most frequently, though, are cocktail swords, which she finds in the restaurant where she works.
'I'mahostess atarestaurant and I getalot of my plastic from there,' she explains. 'My favourite kind of plastics are the little cocktail swords that you get in your drink.
'Onanormal, non-stressful day, it'll beawhole sword, 15 timesaday.'
Kailyn admits her habit could be harmful to her health, adding: 'The fact that I am eating this much inaweek is huge.'
Kailyn is by no means the weirdest subject of My Strange Addiction this season. The series opens with Nathaniel,aman from Arkansas, who admits to being sexually attracted to his car.
Also featured on the show isawoman addicted to drinking nail polish, and another who will eat 900 cat treats every day.
More strange addictions from Season Three...
THE MAN WHO IS SEXUALLY ATTRACTED TO HIS CAR
Nathaniel, 27, from Arkansas, opens the new series of My Strange Addiction.
He describes how he has been in an intimate relationship with his car for nearly five years.
He reveals that he goes on dates with Chase,a1998 Chevy Monte Carlo, buys it birthday gifts, and even has sex with it.
In an interview that airs tomorrow, he tells Anderson Cooper: '[I'm attracted] emotionally and sexual. It is hard to explain.
He continues: 'I see him asahe, that's why I named him Chase... He's been through quitealot during the five years we've been together.'
THE WOMAN WHO DRINKS FIVE BOTTLES OF NAIL POLISH A DAY
Bertha, 23, has been drinking about five bottles of nail polish every day for the past five years.
She says she can't get through the day without her nail polish fix.
Unnerving footage inatrailer for the new series (below) shows her placinganail polish brush on her tongue and licking it clean.
Though one might imagine all nail polish tastes the same, Bertha reveals that the colour blue is her favourite.
Any shade with glitter comesaclose second.
The new season of My Strange Addiction starts on February 12 at 10pm on TLC
Posted by peter kyaw | at 11:53 PM |
ဟယ်...ထူးဆန်းထွေလာ အီကဘာ ပဲတော်။
အဲလိုလူတွေကို သမထ နည်းနဲ့..အာရုံပြောင်းမယ်..၀ိပဿနာနည်းနဲ့ ကုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်မလား ကိုပီတာ။
အော် ဆန်းပါပေ့ စားစရာရှားလို့ 
pica disorder ပီကာရောဂါလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အစားအစာ မဟုတ်တဲ့ အရာတွေကို စားသုံးချင်တတ်တဲ့ ရောဂါပါ။ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ အဖြစ်များပြီး အနည်းငယ်သော ယောက်ျားတွေလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါသည်တွေဟာ အာဟာရချို့တဲ့၊ သွေးအားနည်းရာကနေ လူစားတဲ့အစာ မဟုတ်တာတွေကို စားချင်စိတ် ဖြစ်လာတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အာဟာရ ချို့တဲ့တယ်ဆိုတာ ဆင်းရဲလို့ မစားမသောက်နိုင်လို့ ချို့တဲ့တာရော၊ ချမ်းသာပေမယ့် အစားချေးများလို့ ချို့တဲ့တာရော အကုန် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဟာရချို့တဲ့၊ သွေးအားနည်းသူ အများစု ဒီရောဂါ မဖြစ်ပါဘူး။ ကံဆိုးလွန်းသူ အနည်းစုသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေ သွေးအားနည်းချိန်မှာ ဆေးလိပ်ပြာစားချင်တာ၊ သံဓာတ်ချို့တဲ့တဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ မြေကြီးခဲစားချင်၊ ဆန်အစိမ်းစားချင်.. အခြား ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အရာတွေ စားချင် ဖြစ်တတ်တာ သွေးအားနည်းလက္ခဏာပါ။ ဒါကို လူတွေက ချဉ်ခြင်းတပ်တယ် ထင်ကြတာ။ ဒါက အခိုက်အတန့် သွေးအားနည်းတုန်း ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး pica ရောဂါ အဆင့်တော့ မရောက်ပါဘူး။
အာဟာရချို့တဲ့၊ သွေးအားနည်းတဲ့လူတွေ လောကမှာအများကြီးဟာ ဒီလူတွေအများစု ဘာမှမဖြစ်ဘဲ မဆိုစလောက် အနည်းစုလေးမှာမှ pica ရောဂါ ဖြစ်ရတာကတော့ ၀ဋ်နာကံနာလို့ပဲ ပြောရပါလိမ့်မယ်။
ဒီလို ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေ စားချင်စွဲလန်းနေတဲ့ စိတ်ကို နိုင်နင်းအောင်ထိန်းပြီး ဖြတ်နိုင်ရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်သလို၊ အရက်ဖြတ်သလိုပါပဲ။ addict ဖြစ်နေလို့ စိတ်မခိုင်ရင် ဖြတ်ရတာ လွယ်တော့မလွယ်ဘူး။